Sheekadii Xiisaha laheyd ee Libin Jaceyl Qeybtii 122aad –
By axadle Last updated Mar 6, 2020
Sheekadii Xiisaha Laheyd Ee Libin Jaceyl Qeybtii 120aad –
Falis sidii lagu balansanaa ayay sanno kadib ugu laabatay gurigii ay nolosheeda inta badan ku soo qaadatay Falis maalintaa maalin murug ayay u aheyd waana la aamusi kari waayey.
Markii ay gashay qolkii ay iyada iyo Walaasheed Yaasmiina deganaayeen dib ayay u gocotay maalmihii wacnaa ay qolkaas ku soo wda qaateen Yaasmiin Illaahay ha u naxaristee waxa ay aheyd qofta kaliya ee Falis u dhaweyd wax badan reerka ka dabiri jirtay.
Falis sida qof guriga ku cusub ayay maalintaas marba qol galeysay waxaana aad u garab taagnaa walaalaheed oo noqoshadeeda ku faraxsanaa.
Gabar walba maalin ayay addunyadaan ku leedahay oo arooskeeda la iclaamiyo isla markaana loo cayaaro Falis farxad ay ka weysay gurkeedii hore ayay saaka ku jirtaa waxa ayna ku sugan tahay Hotelkii saaka la filayo inuu meherkeeda ka dhacayo Saaxiibteed Sureer iyo Samiira oo dumaashideed ah ayaa dhinacyada ka taagan oo quruxdeeda kaabayo lebiskeeda ka shaqeynayaan.
Falis mar haddii ay aheyd gabadha curada ee reer Warsame Cali maanta waxaa u dhacayo aroos reerkeeda ku faraxsan yihiin ma jirin cid aan la casuumin oo saaka goobta meherka ka maqan waxaa ku sugnaa dhamaan asxaabta iyo qaraabada iyo saxiibada ganacsiga ee uu lahaa Aabe Warsame Cali oo maalintaa cid kasta ka dareemi kartay sida uu ugu faraxsan nahay guurka curadiisa.
Qadar oo ahaa ninka kaliya ee masuuliyada oo dhan qaatay ayaa ahaa mid Meesha ka muuqday oo howlaha oo dhan isku dubaridaayey Qadar aad ayaa uu ugu faraxsanaa guurka walaashiis wallow uusan weli u hambalyeynin.
Falis maalinteeda si wanaagsan ayuu ugu dhacay meherkeedii waxa uu noqday madal kulmisa reer Kabaweyne oo idil maalintaa Aabe Warsame waa u duco qaaday curadiisa cid kasta iyada oo faraxsan ayay duceyneysay, Falis laf ahaanteeda waa ay ku riyaaqsaneyd sida loo weyneeyey guurkeed iyo garab istaaga reerkeeda marnaba waxa aysan iska indho tiri Karin dadaalka walaalkeed Qadar oo ay indhaheeda ku aragtay.
Waa xilli galab ah waxaa la isu diyaarinaa galbiskii Falis waxaa lagu jiray diyaarintii ugu dambeysay ee Falis lebiskeeda waxaana goobta wax kaga sugnaa Samiira oo maalintaa kaalinteeda muuqaday waxaana soo wacay Qadar oo yiri.
Samiira ma I maqlee baabuurta waa ay naga kala maqan yihiin ee waxba Falis yaan la oo bixin ilaa aniga kula soo hadlo, Baabuurtwa ayaa qaar iga maqan 40 baabuur Ayaan sugaayey qaar ayaan weli imaan.
Hadda mar aan banaanka u soo baxay baabuur badan ayaa joogtayee miyey kala baxeen
Waa joogaan balse waa ay yar yihiin intaas in ka badan Ayaan balansaday waxba yaan la ii dhararin waa ay soo socdaan
Inta joogto Ayaaba naga badan
Walaasheyda rumaad guurkeeda cid baabuur la’aan ku dhacdo ma rabo ee adiga aniga iga war sug
Samiira markii ay telefoonka demisay ayay fiirisay Falis oo laf ahaanteeda dhegaha u taageysay hadalka Samiira ayaa ku tiri.
Wax daran miyaa jira Dumashi
Waxba ma jiraan laakiin walaalkaa ayaad la weyn tahay in ka badan inta aad adiga ku fikireyso bal dariishada fiiri intaan baabuur ayaa uu leeyahay waa ay yar yihiin oo walaashay ka badan ayay u qalantaa.
Falis aamusnaan ayaa ka soo haray
Waan ku dareemayaa Falis marnaba diyaar uma tihid in aad Qadarkeyga aad cafiso balse mid Ayaan ku xasuusinayaa in Qadar uu walaalahaa oo dhan kaaga dhow yahay ileyn iyada calool ayaad wadaagteen balse Qadarkeyga mar qura ayaad wada wadaagteen bal naftaada mar la hadal oo Qadar in ay cafiso u sheeg waan hubaa in aadan qalbi xumeyn oo aad cafin doontid.
Falis mar kale ayay aamusnaan gashay oo aysan erey ku oran Samiira
Samiira waa ay fahmi kartay in aysan sahlaneen in jawaabta ay u baahan tahay aysan si sahlan ku heli Karin haddana waa ay ku rajo weyneyd in maalin uun Falis ay cafin doonto walaalkeed Qadar.
Qadar waxa uu noqday nin balantii uu qaaday ka soo baxay si wanaagsan oo maqam sare ayuu ku galbiyey walaashiis Falis marnaba iskama indho tiri Karin dadaalka iyo kaalinta walaalkeed uu ka cayaaray xafladii guurkeeda.
Falis si wanaagsan ayaa lagu galbiyey iyada iyo Mursal oo gacmaha is heystaan ayaa loo guuriyey gurigeeda waxaana lagu galbiyey farxad iyo reyn reyn aad ayay maqsuud ugu aheyd sida loo weyneeyey maalinteeda cid kasta oo gacan ka geysatay waa ay ku bogaadisay.
Aroos iyo maalintiisa ayaa uu ahaayee Falis iyo xaajigeeda ayaa isu keliyoobay Mursal markiiba waxaa u wacday Aamow oo jikada ku sugneyd waxa ayna tiri.
Mursalow wax walba oo aad ii dirsaday waan kuu keenay
Waxaan filaa waxba kama soo tagin
Wax walba waa kuu keenay xataa dhamaan qudaarta cagaaran waxaan kugu cabeeyey qaboojiyaha
Maasha allah waad mahadsan tahay kolay wixii dheeri aha aniga ayaa ku soo wacayo
Inshah allah mar kale Ayaan hambalyo ku dhahayaa nolosha ha kuu macaanaado
Sidii ayay ku baxday Aamow waxaana isu haray Falis iyo Mursal oo caawa nolosha u bilaabaneyso Falis oo dhowreysay in Aamow ay u soo gasho ayaa Markii ay Mursal aragtay ku tiri.
Mursalow Aamow ii wac waxaan rabaa in ay wiilkayga ii keento manta oo dhan ayaa uu la’aanteyda dhibtoodayee.
Aamow waa ay baxday
Wiil aan aniga aheyd miyaa caawa halkaan laga rabaa
Mursal walaalow Maxamed la’aanteyda ma hurdaayo waxa uu bartay inuu laabteyda ku hurdo waad ogtahay maxaad isu yeelyeeleysaa.
Laakiin laabtaada caawa aniga oo kaliya ayaa leh Maxamed Yare ma arkeysid sow ma ogid in nin dhan aad xaaskiisa tahay oo aad waliba caawa caruus aad u tahay Maxamed yarena Hooyo Maryan ayaa uu la joogaa inta aan usbuuceena wada qaadaneyno.
Mursalow war kuguma gaaro ii ogolow oo kaliya in aan salaada cishaha dukado
Waa waxa kaliya ee aan ogolahay in aad iga mashquusho naftaada iyo waqtigaaga aniga oo kaliya ayaa leh
Mursal iyo Falis habeenkooda ayay qaadeen waxa ay aheyd habeen cid kasta ay la weyneyd waxa ay aheyd habeen ay I dhaarsadeen oo cid kasta qirtay in nolosha aysan isku cidleyn doonin isuguna lamaanaan doonaan.
Waa Sheekadii : Libin Jaceyl kala soco Jimco walba Jowhar.com una gaar ah AxadleTM.com waxaana ku soo fara yareeystay qoraga reer AxadleTM Haalkoos xaalkoos@hotmail.com
axadle 3950 posts
Real Madrid 11-1 Barcelona, Sevilla 8-0 Barcelona, Bayern